कासानोभाः प्रेमी, ठग, जासुस र लेखक, उनीप्रति विवाहित/अविवाहित महिला किन हुरुक्कै हुन्थे ? | Rajmarga
कासानोभाः प्रेमी, ठग, जासुस र लेखक, उनीप्रति विवाहित/अविवाहित महिला किन हुरुक्कै हुन्थे ?
कासानोभा….एउटा व्यक्ति जसले कुनै पनि महिलालाई आफ्नो प्रेमजालमा पार्न सफल हुन्थ्यो । संसार कासानोभालाई यही कारणबाट जान्दछन् । तर कासानोभा एक जना पूजारी, जासुस र लेखक पनि थिए ।
कासानोभाको पूरा नाम जाकोमो जिरोलामो कासानोभा थियो। २ अप्रिल १७२५ मा जन्मिएका कासानोभा बाल्यकालमा भौतिकशास्त्री बन्न चाहन्थे।तर पछि हजुरआमाको आर्थिक सहयोगमा कासानोभाले कानुन र धर्मशास्त्र अध्ययन गरे। यसपछि केही वर्षसम्म कासानोभा एक जना पूजारीका रुपमा पनि रहे।
इटालीको भेनिस सहरका गल्लीमा अहिले पनि कासानोभाका किस्सा गुन्जने गर्दछ । रात नपर्दै कासानोभा डंगाको सहयोगमा आफ्ना प्रेमिकाहरुलाई भेट्न निस्ने गर्दथे । उनी अक्सर आफ्नो पहिचान गुप्त राख्थे, किनभने डर थियो कि विवाहिम महिलाहरुका श्रीमानले उनीमाथि आक्रमण नगरुन् ।
कासानोभाको प्रेममा पूरा यूरोपका महिला उल्झिरहे । चाहे ती विवाहित हुन् वा अविवाहित वा उच्च घरानाका महिला । एक अनुमानका अनुसार २०० बढी महिला भेनिसका कासानोभासँग प्रेम गर्दथे ।
१७ वर्षको उमेरमा मानोन बालेटी ३० वर्षका कासानोभाको प्रेममा परिन् । विवाहको आशमा मानोनले कासानोभालाई पैसा र महत्वपूर्ण दस्तावेज पनि दिइन् । युवतीले कासानोभालाई ४२ वटा प्रेमपत्र लेखिन् । कासानोभालाई जेलबाट रिहा गराउनका लागि उनले आफ्नो हिराको औठीसमेत बेच्ने विषयमा सोचिन् । दुवैको प्रेम तीन वर्षसम्म चल्यो । तर यसक्रममा कासानोभा कयौ अरु महिलाको सम्पर्कमा पनि थिए ।
सन् १७५६ मा अमानवीयतासम्बन्धी आरोपमा फसेपछि कासानोभाले भेनिस छाडेर भागे । तर यसपछि उनले युरोपका चर्च र उच्च घरानामा स्थान बनाए। कासानोभा मानिसहरुलाई ठग्न सफल भए ।
भेनिसमा अब कासानोभाको म्युजियम छ । यो म्युजियमबाट थाहा हुन्छ कि कासानोभा भायलिन वादक, सैनिक, जासुस, कुटनीतिज्ञ, लेखक र फ्रेञ्च लटरीका संस्थापक पनि थिए । कासानोभालाई धनी मानिन्थ्यो । यद्यपि ऋणको चक्करमा उनी कयौपटक जेल पनि गए । तर यसबाट उनको साखमा भने खासै फरक परेन ।
६० वर्षको उमेरमा कासानोभाले आफ्नो घरदेखि टाढा बोहेमियामा एउटा लाब्रेरियनको जागिर खान सुरु गरे । रङ्गीन जवानी बढ्यौलीमा ढल्कँदै गर्दा एक्लोपनको शिकार भन्दै गए । चिकित्सकहरुले डिप्रेशनबाट बच्नका लागि कासानोभालाई लेख्न सल्लाह दिए । कासानोभाले ‘द स्टोरी अफ माई लाइफ’ नामको ३ हजार पृष्ठको पुस्तक पनि लेखे । यो संसारको सबैभन्दा बढी विक्री हुने पुस्तकका रुपमा चर्चित छ ।
भेनिसमा हरेक वर्ष डेढदेखि दुई करोड पर्यटक पुग्ने गर्दछन् । कयौले कासानोभाका बारेमा जान्न चाहने राख्छन् ।यहीबाट कार्लो पारोडीको दिमागमा कासानोभा म्युजियमको आइडिया आयो । २ अप्रिल २०१८ मा उनले आम नागरिकहरुका लागि कासानोभा म्युजियम स्थापना गरे । एजेन्सी
Previous post: बिहे गर्ने उमेरमा दुई सन्तानकी आमा ! सानैमा बिहे गरेकामा अहिले आएर पछुतो
Next post: फौजदारी अभियोगमा सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था गरिँदै